Filtrer les éléments par date : jeudi, 29 novembre 2018
Onitiana Realy: Haka sasatra ara-politika
Taorian'ny faharesena goavana ny kandida Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana voalohany, dia nanapa-kevitra ny haka sasatra ara-politika i Onitiana Realy, izay minisitry ny mponina teo aloha, ary talen'ny fampielezan-kevitry ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina.
Nilaza moa izy fa hifantoka kokoa amin'ny asa mpandraharaha ara-tserasera azy, sy hanohy ny asa soa fanaony sy mahasarika azy hatrany.
jeudi, 29 novembre 2018 10:13
Morondava: Tovolahy tsy ampy taona dia efa mpamaky trano gaigilahy
Voasambotry ny Polisy ireo mpamaky trano tao Antsakoameloky sy Angara, eto an-drenivohitry ny Faritra Menabe. 17 taona ny zandriny amin’izy ireo ary 24 taona ny zokiny.
jeudi, 29 novembre 2018 09:51
Fanafihana mitam-basy: Karana lahy iray maty voatifitra
Mpandraharaha teratany karana iray tokony ho 45 taona no notifirin'ny jiolahy teny Mahajanga Be ka namoy ny ainy noho ny tifitra nahazo azy teo amin'ny takibany havanana. Omaly alarobia maraina 28 novambra tokony ho tamin'ny 8 ora sy sasany teo no nisehoan'ny fanafihana teny akaikin'ny Pharmacie Avenir. Nitondra moto ity farany ary nisy roalahy nanaraka ka tonga dia nitifitra azy in-droa nisesy.
Tsy mbola fantatra mazava ny vola very nandritra ny fanafihana satria ireo polisy nanao fanarahan-dia nilaza fa nitondra vola tamin'ny baoritra ity karana ity ary lasan'ireo olon-dratsy izany. Ny vadiny kosa anefa nanamafy fa vola 4 hetsy Ariary izay mbola hita tany am-paosiny ihany no nentiny niala avy any an-trano ny maraina teo.
Tsy nisy voasambotra ireo jiolahy fa mbola mandeha ny fikarohana.
Mpandraharaha amin'ny fivarotana fiara ity teratany karana ity ary misehatra amin'ny fitaterana mpianatra ihany koa na irony « transport scolaire » irony.
Déclaration du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis Stuart Wilson
Au nom du people Américain, je voudrais féliciter tous les candidats à l’élection présidentielle pour avoir enrichi le débat démocratique à Madagascar. Aujourd’hui, je félicite Monsieur Ravalomanana et Monsieur Rajoelina pour la confiance que le peuple Malagasy a placée en eux et pour leur engagement déclaré au respect de la Constitution et à un processus électoral transparent. Comme Madagascar avance vers le prochain tour des élections en décembre, nous, les Etats-Unis, restons engagés à travailler avec vous pour soutenir la paix et la prospérité.
jeudi, 29 novembre 2018 09:49
Fanambaran’ny Mpiandraiki-draharahan’ny Masoivoho Amerikana Stuart Wilson
Amin’ny anaran’ny vahoaka amerikana, dia tiako ny hiarahaba ireo kandida ho filoham-pirenena rehetra tamin’ny fanatevenana ny adihevitra demokratika teto Madagasikara. Miarahaba an’Atoa Ravalomanana sy Atoa Rajoelina nohon’ny fitokisana nomen’ny vahoaka malagasy azy ireo sy ny fanambarany ny faharesen-dahatra avy aminy hanohy hanaja ny Lalam-panorenana sy ny zotram-pifiidanana mangarahara. Ao anatin’izao firosoan’i Madagasikara amin’ny fihodinana manaraka amin’ny fifidiana izao ny volana desambra, i Etazonia dia manamafy ny fahavononany hiara-hiasa ho fanohanana ny filaminana sy ny fampandrosoana.